Plex.Earth, ohatra tsara amin'ny fidirana amin'ny tsena Hispanika - Geofumadas
Janoary, 2012 Google Earth / Maps, fanavaozana
Vao haingana dia navoaka ny pejy espagnol an'ny pejy PlexScape, izay ankoatra ny famoahana Grika tany am-piandohana dia nisy ihany koa tamin'ny teny anglisy sy frantsay.
Tahaka antsika ny fihetsika manan-danja iray, izay nahitantsika ny fanondroana teo aloha, satria Plex.Earth ao anatin'ny fiteny 10 mihoatra noho ny teny Espaniôla ao amin'ny version 2.0.
Eny, tsy ny tsiro fotsiny no fiteny faharoa fampiasa indrindra ao amin'ny Google. Saingy io koa dia vokatry ny fironana marihitra mankany amin'ity sehatra ity, izay maneho olona tsy latsaky ny 500 tapitrisa, na dia aparitaka manerantany aza, dia mifantoka amin'ny kaontinanta amerikana sy ny saikinosy Iberia izy ireo. Sehatra iray izay matotra isan'andro amin'ny tsena, izay ahaizan'ireo orinasa sy matihanina tsikelikely mampiasa ny lozisialy ara-dalàna sy ny governemanta hampiasa ny politika hampaharitra ny fampiasam-bola amin'ny sehatry ny haitao.
Sarobidy ihany koa ny zava-misy malaza iray, nampiasain'izy ireo ny fandikan-tenin'olombelona, ​​izay manome mazava tsara ny atiny, mifanohitra amin'izay vokarin'ny Google Translate amin'ny fiezahany tsara indrindra hahatakatra ny fahaizantsika fiteny.
Geofumadas dia nanara-maso an'i Plex.Earth nandritra ny roa taona izao, efa ho akaiky ny famoronana azy. Azoko an-tsaina izao ny mpamorona azy (injeniera sivily), nametraka fanontaniana telo tamin'ny tenany izay azo antoka fa maro no niampita teo afovoany:
Mety ho azo atao ve ny manana Google Earth amin'ny AutoCAD, mba hanararaotra ireo sary amin'ny satelita sy ny WMS izay manompo any?
Ary azo atao ve ny misintona amin'ny Google Earth, manana ny mari-pototra izay atolotry AutoCAD, ary mitahiry ireo angona ao amin'ny dwg?
Azonao atao ve ny miasa amin'ny version AutoCAD?
Fantatray fa ny lohahevitra dia mahaliana ny ankamaroan'ny faritra manerantany, fa ny tontolonay latina amerikana dia ampahany liana liana amin'ny fanararaotana ny Google Earth. Raha mipetraka any Netherlands ianao ary mila sary nomerika dia mifandray amin'ireo serivisy wms izay manome azy maimaimpoana fotsiny ianao, raha ny tadiavinao dia ny orthophoto dia mandeha miaraka amin'ny Cadastral Institute ianao ary mahazo azy amin'ny vidiny mirary na maimaim-poana ao anatin'ny fifanarahana Fifanakalozana ny sarintany lehibe.
Fa raha mipetraka any Amerika Latina ianao ((ankanavaka vitsy), ny orthophoto nalain'ny National Cadastre miaraka amin'ny volam-bahoaka dia tsy misy, raha tsy manana antontan-taratasy nosoniavin'ny filoham-pirenena ianao, dia satria tsy manana intsony izy ireo na mila omenao hanaikitra azy. amin'ny mpitan-tsoratra hivarotra azy aminao ambany ambany. Amin'ny tranga hafa dia amidin'izy ireo izany, saingy eo ambanin'ny lisitra ny vidiny ... izay tsy azonao akory aza rehefa hitanao ny vidin-javatra takian'izy ireo amin'ny sarintany cadastral amin'ny endrika pirinty.
Ka ny Google Earth, miaraka amin'ny fetrany, dia lasa manintona. Miaraka amin'ny mason-tsivana tsara amin'ny fanitsiana ny fanadihadiana eny an-tsaha dia nanjary vahaolana ho an'ny fahalemen'ny andrim-panjakana sy ny fahaiza-miasa izy io hanararaotana ny loharano izay tsy misy.
Farafahakeliny tamin'ireo fanamarihana ireo no niresahantsika momba azy ireo:
Inona no ho entin'i Plex.Earth 2.5?
Faly izahay mahita ireo fanovana naroso, hita taratra amin'ny kinova farany, ary nahita koa izy ireo fa mety ny Espaniôla. Raha niresaka tamin'ny iray tamin'ireo mpamorona azy dia nilaza izy fa efa ho ny ampahatelon'ny mpanjifany ankehitriny dia miteny espaniola.
Ho anay, mandray anay ianao ary manantena fa hampiely ity vokatra revolisionera ity, angamba ny fifandraisana tsara indrindra eo amin'ny Google Earth sy AutoCAD.
Previous Post«Previous Tintin, niverina tany amin'ny fahazazako
Next Post Mitondra fahatsiarovana ara-teknika amin'ny tontolon'ny CivilCADmanaraka »